မိမိတို့အတွက် အရေးကြီးသည့် Drive ဖျောက်နည်း | HARRIS
မိမိ အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေ အားလုံးကို partition တစ်ခုမှာထည့်လိုက်ပါ။ ပြီရင် ကျွန်တော် အောက်မှာ တင်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.။ ဒီထပ် ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ မိမိက partition (4)ပိုင်း ပိုင်းထားတယ်ဆိုပါဆို။ ကိုယ်က တစ်ပိုင်းကို hide လိုက်တဲ့ အခါမှာ မိမိ စက်ကို အခြား သူငယ်ချင်းတွေ အမြင်မှာ partition (3) ပိုင်းဘဲ တွေ့ရတော့မယ်။ ဒါကြောင့် Software ထပ်လုံခြုံပါ တယ်။ ဘာပြဿသနာာနာမရှိပါဘူး။အတော်အတန့် မိမိ ဖြောက်ထားတဲ့ partition ကို ကိုယ့်စက်လာသုံး တဲ့လူ မသိနိုင်ပါဘူး။ လေအတော် ရှည်နေပြီး အောက်က နည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.။ Windows အားလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
1. Start >> Run >> gpedit.msc လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါ်လိုက်ပါ။
2. user configuration >> Administrative Templates >> Windows components >> Windows Explorer စတဲ့ အတိုင်းရောက်အောင် သွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Windows Explorer ကို ရောက်တာနဲ့ Double click နိုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ Hide these specified drives in My computer ကိုရှာ လိုက်ပါ. ။ တွေ့ရင် Double click နိုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
3.Hide these specified drives in My computer ကို Double click ပေးလိုက်ပါ။ ပြီရင် အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ အတိုင်း Enabled ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ.။ Option အောက်က အကွက်မှာ မိမိက partition အားလုံးကို ဖျောက်မှာလာ။ တစ်ခုကိုဘဲ ဖျောက်မှာလာဆိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်.။ ကျွန်တော်ကတော့ D: partition တစ်ခုကိုဘဲ ဖျောက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Restrict D Drive only ကိုဘဲ ရွှေးလိုက်ပါတယ်။ Apply ကို နိုပ်ပြီ OK ပေးလိုက်ပါ။ My computer ဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ မိမိဖျောက်လိုက်တဲ့ Drive ကို မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ ပြန်ဖော်ချင်ရင် Not Configured ကို အမှန်ခြစ်ပြန်ပေးလိုက်ပါ။